Izinga le-ASTM D2603 lichaza ukuvivinywa kokuqina kokugcwala kwe-sonic kuketshezi lwe-hydraulic ngaphansi kwengcindezi ye-shear eyenziwe nge-ultra-sonically. Ama-Hielscher ultra-sonicators asetshenziswa njengamadivayisi athembekile okusika i-shear asetshenziselwa ukuhlola ukusimama kokuqina kwesiketshezi se-hydraulic ngokuya nge-ASTM D2603 Standard Test Method yeSonic Shear Stability of Polymer-Contain Oils.
I-ASTM D2603 - Ukuzinza kwe-Ultra-Sonic Shear kwamafutha we-Polymer aqukethe
Inhloso: Uketshezi lwe-Hydraulic, uwoyela wezinjini, uketshezi lokuhambisa izimoto, oketshezi logandaganda nolunye uketshezi lokuhambisa amandla kutholakala emandleni okugunda ngamazinga ahlukahlukene ngesikhathi sokusebenza okujwayelekile, okungaholela ekushintsheni kwe-viscosity nokuncipha okulandelayo kokusebenza kahle. Ukuze uthuthukise inkomba ye-viscosity ye-hydraulic fluids, ama-polymers ayengezwa kulezi ziphuzo. Isivivinyo se-ASTM D2603 sihlola ushintsho lwe-viscosity kuketshezi oluqukethe i-polymer evezwe emandleni e-shear eyenziwe nge-ultrasound, okuthiwa ukunyakaza kokugunda kwe-sonic.
Isicelo: Kuyinjongo ye-ASTM D2603 protocol ukuthola i-viscosity yesampula. Ngakho-ke, isampuli ibekwa ku-beaker yokuhlola, ithanjiswe ekushiseni okucacisiwe kokuhlolwa futhi i-sonicated kusetshenziswa iphenyo ye-ultra-sonic ngesikhathi esichazwe ku-protocol protocol ASTM D2603. Ngemuva kwalokho, i-viscosity evelayo yoketshezi iyalinganiswa futhi ushintsho ngqo ku-viscosity lubikwa ngamaphesenti.
Izicelo Zokuhlola i-Ultra-Sonic Shear
Isayensi yezinto ezibonakalayo
Ucwaningo & Ukuthuthukiswa
Indlela yokuhlola ebalulwe kuphrothokholi ye-ASTM D2603 ivumela ukuhlolwa kokuqina kweshear nokuphazanyiswa okuncane okuvela ezintweni ezishisayo nezixubayo ezingaba khona kwezinye izinhlelo zokusebenza. Kutholakale kusebenza kuketshezi lwe-hydraulic oluqukethe ama-polymers agundwe kalula futhi amelana ne-shear. Ukuhlanganiswa nokusebenza esimweni sezicelo ze-hydraulic sekusunguliwe.
Uhlelo lwe-Ultra-Sonic Shear I-UP400St (24kHz, 400W) Ukuhlolwa kwe-ASTM D2603 Sonic Shear Stability
Yini Engiyidingayo Ekuvivinyweni kokuqina kwe-ASTM D2603 Ultra-Sonic Shear?
I-Ultrasonicator: uhlobo lwe-probe-ultra-sonic ene-oscillator yemvamisa engaguquki nophondo lwe-ultra-sonic (olwaziwa nangokuthi iphenyo noma i-sonotrode). Idivayisi ejwayelekile ye-ultrasonic esetshenziselwa ukuhlolwa kwe-ASTM D2603 yi- I-UP400ST (24kHz, 400W) ene-ultrasonic probe (uphondo / sonotrode) S24d22.
Ukugeza kwamanzi / kweqhwa: Ukugeza kwamanzi okupholisa noma ukugeza ngeqhwa ukuze ugcine izinga lokushisa olifunayo njenge-0 ° C.
Inzwa yethempelesha efana ne-PT100 (efakwe namadivayisi we-ultrasonic UP400ST)
I-Griffin 50mL beaker, eyenziwe ngengilazi ye-borosilicate.
Ukuvalelwa komsindo (uma uthanda): Ibhokisi lokuvikela umsindo elizofaka uphondo lwe-ultra-sonic ukunciphisa izinga lomsindo elikhiqizwa yidivayisi ye-sonic shear.
I-Viscometer: noma iyiphi i-viscometer nokugeza okuhlangabezana nezidingo ze-Test Method D445 kwanele.
Okusetshenziswayo oketshezi: Uketshezi oluyinhloko oluyinkomba yi-ASTM Reference Fluid A, uwoyela kaphethiloli oqukethe ipolymer ekwazi ukudilizwa yisiyaluyalu ngamazinga aphezulu okushefa. Lo oyili unezici ezijwayelekile ezilandelayo: Lo oyili une-viscosity engaba ngu-10.8 mm2 / s (cSt) ku-100 ° C kanye ne-viscosity engaba ngu-58 mm2 / s (cSt) kuma-40 ° C.
Uketshezi lwesibili lwesethenjwa yi-ASTM Reference Fluid B, uwoyela kaphethiloli oqukethe ipolymer ekwazi ukudilizwa yisiyaluyalu ngamazinga aphezulu okushefa. Lo oyili une-viscosity engaba ngu-13.6 mm2 / s (cSt) kuma-40 ° C.
Kungani iHielscher Ultra-Sonicators yezivivinyo ze-ASTM D2603?
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngamadivayisi we-shear we-ultrasonic asebenza kakhulu wokuhlolwa kokuqina kwe-shear ngokusho kwe-ASTM D2603 ne-ASTM D5621. Ngemvamisa ehleliwe, amandla we-shear we-ultrasonic onokwethenjelwa, amadivayisi we-Hielscher ultra-sonic shear alungele ukuhlolwa kokuqina kweshear oketshezi lwe-hydraulic. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher afakwe isoftware ehlakaniphile nezilungiselelo, ezivumela ukuhlolwa okuyinkimbinkimbi ngokwamazinga we-ASTM. Imenyu ifinyeleleka kalula nge-digital touch display noma nge-remote control yesiphequluli. Ngenkathi imvamisa ilungisiwe, ebalulekile kwimiphumela enokwethenjelwa ye-sonication namazinga we-ASTM, i-amplitude ingasethwa ngqo kumthelela we-stroke oyifunayo.
Ukulinganiswa kwama-Hielscher ultrasonicators kulula futhi kungenziwa ngokushesha futhi kube lula ngemenyu eyinkimbinkimbi. Onke ama-ultrasonicators edijithali afakwe inzwa yokushisa engaxhuma, egcina irekhodi lokushisa kwesampula iphinde ilidlulisele emuva ku-generator ye-ultrasonic, lapho yonke imininingwane ebalulekile ye-sonication efana ne-amplitude, isikhathi sonication nobude besikhathi, izinga lokushisa, nengcindezi (lapho inzwa yengcindezi ifakiwe) arekhodwa ngokuzenzakalela ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi. Lezi zici ezihlakaniphile zivumela ukuhlolwa kwe-ultra-sonic shear ethembekile futhi ekhiqizwayo futhi yenza ukusebenza kube lula futhi kuphephe.
Amadivayisi we-Hielscher Ultrasonics wokuhlolwa kokuqina kwe-shear ahambisana nawo womabili, amazinga we-ASTM D-2603 ne-D-5621.
Ama-Hielscher Ultrasonicators esici se-ASTM D2603 Viscosity Shear Test:
isoftware ehlakaniphile ene-timer yesikhathi esiqondile sonication
idijithali, isikrini sokuthinta esinemibala
ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo ekhadini le-SD
inzwa yokushisa ehlanganisiwe
Sicela usebenzise ifomu elingezansi ukucela imininingwane eyengeziwe mayelana nezinhlelo ze-ultra-sonic shear, izinhlelo ze-ASTM namanani. Sizojabula ukuxoxa ngezidingo zakho zokuhlolwa kwe-ASTM nawe futhi sikunikeze ngedivayisi ye-ultra-sonic shear ehlangabezana nezidingo zakho!
Izinhlobo ezahlukahlukene ze-sonotrode (iphenya / izimpondo) zedivayisi ye-sonic shear UP400St, engasetshenziselwa i-ASTM D2603 – Indlela Ejwayelekile Yokuhlola ye-Sonic Shear Stability yama-Polymer Aqukethe Amafutha
I-ASTM D2603-20, Indlela Yesivivinyo Esijwayelekile yeSonic Shear Stability yama-Polymer aqukethe Amafutha, i-ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020.
I-ASTM D5621-20, Indlela Ejwayelekile Yokuhlola yeSonic Shear Stability of Hydraulic Fluids, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020.
Ububanzi be-ASTM D2603 Ultra-Sonic Shear Stability Test Protocol
Le ndlela yokuhlola ihlanganisa ukuhlolwa kokuqina kweshear ketshezi olubacindezela ngokubhekisele ku-viscosity yokugcina ebangelwa ukukhanyisa isampula ye-hydraulic fluid ku-sonic oscillator.
Kuthulwe ubufakazi bokuthi kukhona ukuxhumana okuhle okukhona phakathi kokucekelwa phansi kwe-shear okuvela ekushisweni kwe-sonic futhi okutholwe kwinqubo yokuhlolwa kwepompo ye-vane.
Le ndlela yokuhlola isebenzisa amamilimitha ayisikwele ngomzuzwana (mm2 / s), iyunithi le-SI, njengeyunithi ye-viscosity. Ngemininingwane, iyunithi elilinganayo, i-cSt, ikhonjiswa kubakaki.
Leli zinga alisho ukubhekana nazo zonke izinkinga zokuphepha, uma zikhona, ezihambisana nokusetshenziswa kwalo. Kungumsebenzi womsebenzisi waleli zinga ukusungula izindlela zokuphepha ezifanele, ezempilo nezemvelo futhi anqume ukusebenza kwemikhawulo yokulawula ngaphambi kokusetshenziswa.
Leli zinga lamazwe ngamazwe lasungulwa ngokuya ngemigomo eyamukelwa umhlaba wonke mayelana nokuqokwa kwamazinga okusungulwe eSinqumweni Semigomo Yokuthuthukiswa KwamaZinga Womhlaba Wonke, Imihlahlandlela kanye Nezincomo ezikhishwe yiKomidi Lezobuchwepheshe Bezokuvimbela Izokuhweba (i-TBT) Lomhlaba.